कर्णालीको विकास मोडल तयार पार्न आयोगको यस्तो पहिलो निर्णय – Pahilo Page
कर्णालीको विकास मोडल तयार पार्न आयोगको यस्तो पहिलो निर्णय
९ मंसिर २०७५, आईतवार १६:५३ 738 पटक हेरिएको
काठमाडौं, ९ मंसिर । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले शपथ ग्रहण गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित शपथग्रहण समारोहमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोगका उपाध्यक्ष पुण्य रेग्मीलाई शपथग्रहण गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीबाट शपथग्रहण गरेलगत्तै उपाध्यक्ष रेग्मीले आयोगका सदस्यहरु डा. दीपेन्द्र रोकाया र योगेन्द्र शाहीलाई शपथग्रहण गराएका थिए । शपथग्रहण समारोहमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सांसदहरु, प्रदेश सरकारका सचिव तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले आफूहरु पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा लाग्ने बताए । ‘‘अब तत्कालै कर्णाली प्रदेशको अहिलेको अवस्था देखाउने मानचित्र र समृद्ध कर्णालीको सपनाको मानचित्र तयार गर्छौं’, उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘‘दुबै मानचित्रलाई अगाडि राखेर हामी समृद्ध कर्णाली निर्माणको दिशामा तदारुकताका साथ अगाडि बढ्छौं ।’’
उपाध्यक्ष रेग्मीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै आव २०७६÷७७ को एकवर्षीय योजना निर्माणमा पनि आयोग लाग्ने बताए । उनले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अनुगमनको कामलाई पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसैबीच योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले आजै पदवहाली गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिएको कार्यकक्षमा उपाध्यक्ष डा. पुण्य रेग्मी, सदस्यद्वय डा. दीपेन्द्र रोकाय र योगेन्द्र शाहीले पदवहाली गरेका हुन् ।
उपाध्यक्ष रेग्मीले पदवहालीसँगै कर्णाली प्रदेशको विकास मोडेल तयार गर्न कर्णाली प्रदेश प्रोफाइल निर्माण गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
पदबहालीका लागि पुगेका आयोगका पदाधिकारीहरुलाई प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सचिव तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले स्वागत गरेका थिए ।